Aqoonyahanadda shisheeye oo ka mushaar yar iswiidhishka ay isku xirfadda leeyihiin | Somaliska
Aqoonyahanadda aqoonta sare leh ee dalka dibadiisa ku dhasha ayaa ah kuwo mushaar yar kuwa ay isku xirfaddda iyo aqoonta yihiin ee dalkaaan u dhasha. Sidaas waxaa lugu sheegay warbixin ay soo saartay hey’adda qoonyahanadda sare ee dalkaan Iswiidhan ee SACO.
Aqoonyahanadda leh aqoonta macalinimo iyo injineernimadda ayaa ah kuwa ay warbixintu sheegtay in ay ka mushaar yar yihiin kuwa dalkaan asalkoodu yahay. Ma ahan oo keliya aqoonyahanadda dibadda ku dhashay ee waxaa la mid ah sida warbixintu tibaaxeeyso kuwa dalka ku dhashay ee asalkoodu yahay ajaanib. Göran Arrius oo ah madaxa urrurka ayaa hadal uu siiyey raadiyo Iswiidhan laanteeda wararka ee Ekot ku sheegay inuu ka xun yahay farqiga mushaaradda ee suuqa shaqada dalkaan ka jira.
“Waa arrin aad u leh muhiimadeeeda. Dalkana waxa sanadihii ugu dambeeyey soo galay dadyow faro badan, waxaa mustabaqalka ina soo food saaraya dhibaatooyin xagga bulshadda ah haddii aynaan ka shaqeyn isdhexgalka bulsho” ayuu yiri Göran oo intaa hadalkiisa ku daray in ay misna tahay muhiim in aqoonyahanadda shisheeye ay helaan shaqooyin la xirriira aqoonta ay xambaarsan yihiin iyo mushaar la mid ah kuwa ay isku xirfada yihiin ee iswiidhish-ka ah.